Junior အတွက်​.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » Junior အတွက်​..
Posted by Iris on Apr 26, 2014 in My Dear Diary | 25 comments
..အရမ်​းဝမ်​းနည်​းတဲ့ အခါ သူငယ်​ချင်​း​တွေကိုဖွင်​့​ပြောပြပါ။ သူတို့တစ်​​ယောက်​ခြင်​းစီကကြားရတဲ့ အကြံဉာဏ်​​တွေကို နား​ထောင်​ပြီး ပြန်​လည်​​ဆွေး​နွေးပါ။ ဝမ်​းနည်​းတာ​တွေ​မေ့သွားပြီး​တော့ မင်​းဟာ သင်​ချာတစ်​ပုဒ်​အ​ဖြေရှာ​နေရသလို​ပျော်​ရွှင်​လာလိမ်​့်​မယ်​။
(ငါငို​နေမှန်​းသိတုန်​းက မင်​းအနားချက်​ခြင်​း​ရောက်​လာပြီး စကား​တွေအများကြီး​ပြောပြီး ပြုံးရယ်​​စေခဲ့သလို​​​ပေါ့။)
..ပြသနာ တစ်​ခုကို ကိုယ်​တိုင်​မ​ဖြေရှင်​းနိုင်​တဲ့အခါ လက်​​လျှော့ မပစ်​လိုက်​ပါနဲ့။ ​မင်​း​ဘေးနားကအကူအညီ​တွေကို လိုလိုလားလား လက်​ခံလိုက်​ပါ။ အဲ့ဒီ အခါမှာ မင်​းမ​ဖြေရှင်​းနိုင်​တာမဟုတ်​ဘဲ ​ပျောက်​​နေတဲ့ကွင်​းဆက်​​လေးကို သူတို့ဆက်​​ပေးတယ်​ဆိုတာသိလာလိမ်​့မယ်​။ သူတို့ကိုလိုလိုလားလား​ကျေးဇူးတင်​​ကြောင်​းပြလိုက်​ပါ။
..အမှားတစ်​ခုတစ်​ခု လုပ်​မိတဲ့ အခါ ဖုံးကွယ်​မထားမိပါ​စေနဲ့။ အသိ​ပေးပြီး အမှန်​ပြန်​ ဖြစ်​​အောင်​ လုပ်​ပြလိုက်​ပါ။ (ဟီး အဲ့ဒီ အချက်​ က မင်​း ဆီ က ငါ အတုခိုးထားတာ)
..စကားအမှား​ပြောမိမှာ မစိုးရိမ်​ပါနဲ့…သူတို့က မင်​းထင်​သ​လို မင်​းကို အထင်​​သေးမှာ မဟုတ်​ဘူး။ မင်​း နားလည်​လာ​အောင်​ရှင်​းပြမယ်​ဆိုတာ သူတို့ရင်​ထဲက ရည်​မှန်​းချက်​ပဲ။
..ကိုယ်​့ကိုကိုယ်​ ကျန်​းမာ​အောင်​​နေပါ။ မင်​း ​နေမ​ကောင်​းရင်​ မင်​းနဲ့ ထပ်​တူ ခံစား ရတဲ့ သူ​တွေ ကို စိတ်​မပူပန်​​စေရ​အောင်​။
..အန်​ဒရယ်​ ဖြစ်​​စေမဲ့ အပြုအမူ​တွေ၊ မလုံခြုံမှု​တွေကို ဖြစ်​​စေမဲ့ အပြုအမူ​တွေ။ အသုံးအ​ဆောင်​​တွေကို သတိထားပါ။ တကယ်​လို့ ထိခိုက်​မှုတစ်​ခုခုဖြစ်​ပွားခဲ့ရင်​ ​ဘေးနားကသူ​တွေကိုတတ်နိုင်သ​လာက်ကူညီ​ပ။​​ကိုယ်​လွတ်​ရုန်​းထွက်​ခဲ့ရင်​ မင်​းရဲ့နာကျင်မှူထက်စိ​​တ်​ဒါဏ်​ရာကပိုနက်​လိမ်​့မယ်​။
..အဆူခံရတဲ့ အခါ ဆူတဲ့သူကို မမုန်​းပါနဲ့။ မင်​းမမြင်​တဲ့ ရှု​ဒေါင်​့က​နေမြင်​သူအဖြစ်​ သတ်​မှတ်​လိုက်​ပါ။ ပြန်​ရှင်​းပြလိုက်​ပါ။ သူလက်​ခံလိုက်​တဲ့ အခါ မင်​း​ကျေနပ်​နှစ်​သက်​သွားမှာဖြစ်​သလို သူကလည်​းမင်​းကို အသိအမှတ်​ပြုလိမ့်​့မယ်​။
..တစ်​ဖက်​သား​ပြောတဲ့ စကားကို​လေး​လေးစားစားနား​ထောင်​ပါ။ ငြင်​းစရာရှိရင်​​သူ့စကားဆုံးမှငြင်​းပါ။
..အယူအဆ ဆုံးဖြတ်​ချက်​မတူ ​ပေမဲ့ သူကို​လေးစားပါ။ ရန်​သူတစ်​​ယောက်​လိုမဆက်​ဆံပါနဲ့။
..ကတိကိုလွယ်​လွယ်​မ​ပေးမိပါ​စေနဲ့။ ​ပေးခဲ့ရင်​တည်​ပါ​စေ။ (အားနာပြီးကိုယ်​မလုပ်​နိုင်​တာမျိုးကို ကတိမ​ပေးပါနဲ့။ ယဉ်​ယဉ်​​ကျေး​ကျေးငြင်​းပစ်​လိုက်​ပါ။ သူမင်​းကိုအဲ့ဒီအတွက်​မုန်​းသွားမှာ မဟုတ်​ပါဘူး။)
..အထီးကျန်​တယ်​လို့ ခံစား​နေရရင်​ သူငယ်​ချင်​းတစ်​​ယောက်​​ယောက်​နဲ့ စကား​ပြောပါ။ ကိုယ်​့​ရှေ့မှာ တစ်​စိမ်​းတစ်​​ယောက်​​ယောက်ဖြတ်​သွားရင်​ရယ်​ပြလိုက်​ပါ။
..မိသားစုကို သတိရ​ကြောင်​း အသိ​ပေးပါ ကိုယ်​ကိုတိုင်​ မ​ရောက်​နိုင်​​သေးရင်​။
..မိုးရွာတဲ့အခါ ငါ့ကိုသတိရပါ။ အပြင်​မှာ တကယ်​မိုး​တွေရွာ​နေတယ်​။
:-D. သူများ​တေ​ွ​ရေးတာအားကျလို့ ။ သမီး​လေး၊သား​လေး​ရေးစရာမရှိလို့ မရှိ ရှိတာ​ခေါင်​းစဉ်​တပ်​ပလိုက်​တယ်​။ လာမဖတ်​မှန်​းသိသိကြီးနဲ့။
နေပူကြဲတဲထဲမှာ မင်းကို သတိရပါတယ် …
လာဖက် ဆိုရင်တောင် လာဖက် ပါဦးမယ် … ဟီဟိ
မှတ်သားထိုက်တာတွေမို့ မှတ်သားသွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မလိုက်နာချင်ပဲ လိုက်နာဖို့ ပေးလိုက်ရတဲ့ကတိ တွေအတွက်ကျတော့ အတော်ခံစားရတယ်။
ဟုတ်​တယ်​ မမသဲ။ ကျမလိည်​းဒီက လုပ်​​ဖော်​ကိုင်​ဖက်​​တွေသင်​​ပေးလို့။ ကျတို့​တွေ အယူအဆ ​တွေအတွက်​ငြင်​းခုန်​ကျတယ်​။ ဒါ​ပေမဲ့ ရန်​သူလို့မသတ်​မှတ်​ဘူး။ ကတိ​ပေးပြီးရင်​​တော့ လုပ်​ကိုလုပ်​ရတယ်​။ မလုပ်​နိုင်​ရင်​ ကတိ​မ​ပေးခင်​ ရှင်​းပြရတယ်​။ ဘာ​ကြောင်​့လည်​းဆို​တော့ အလုပ်​​တွေက ဆက်​စပ်​​နေတယ်​။တစ်​​ယောက်​လွဲ​ချော်​သွားရင်​ အကုန်​လိုက်​ပြီး ထိခိုက်​ကုန်​တယ်​​လေ။
၆မျက်​နှာကို​တော့ သူ့မူပိုင်​ရှင်​ ​ဗိုက်​​ခေါက်​ဆွဲလိမ်​လိမ်​့မယ်​။
သည်ပုံနဲ့ ဆို သည်တသက်
သမီးလေး သားလေး တပ်စရာ အတော် နီးစပ်အုံးမယ်…
(ကိုယ်​့​ရှေ့မှာ တစ်​စိမ်​းတစ်​​ယောက်​​ယောက်ဖြတ်​သွားရင်​ရယ်​ပြလိုက်​ပါ။) တစ်ခါတုန်းက လှည်းတန်းမှာ ဆိုင်ဖွင့်တော့ အဲဒီဆိုင်ရှေ့မှာခုံနဲ့ထိုင်နေရင်း လမ်းပေါ်လှည့်ကြည့်တဲ့ တစ်စိမ်းတစ်ယောက်ကို ရယ်ပြလိုက်တာ အဲဒီလူက ခြေလှမ်း ၃-၄ လှမ်းလောက်လျှောက်ပြီး ပြန်လှည့်လာကာ ငါ့တူနဲ့ စကားခဏပြောကာ မေးကြည့်ချင်တယ်ဆိုပြီး သူမေးတာတွေ လိုက်ဖြေရတာ ကြာတော့စိတ်ညှစ်လာတာနဲ့ ဦးက ဘာလို့ဒါတွေလာမေးနေတာလဲဆိုတော့ စိတ်မရှိပါနဲ့ငါ့တူရယ် ဦးကစိတ္တဇဆေးရုံက ဆရာဝန်ပါတဲ့။ အဲဒီမှသဘောပေါက်လိုက်တယ် သူ့ကိုမသိဘဲ ရယ်ပြလိုက်တာ ကျုပ်ကိုစိတ်မနှ့သူထင်သွားလို့ ဖြစ် မယ်လေ။
ဦးခ ​နောက်​​နေတာထင်​တယ်​။ ကျမတကယ်​လုပ်​ဖူးတယ်​။ ရင်​ထဲကလာတဲ့ အပြုံးနဲ့ ကိုယ်​တစ်​ခါမှမမြင်​ဘူးတဲ့သူ​တွေကိုပြုံးပြဘူးတယ်​။ တကယ်​စိတ်​ချမ်​းသာစရာ​ကောင်​းတဲ့ အပြုံးကိုပြန်​ရတယ်​။ ​နောက်​ပိုင်​းလမ်​းမှာ​တွေ့ရင်​ သူက အမြဲနှုတ်​ဆက်​​လေ​ရော။ ဘာဘာညာညာ​တွေမစဉ်​းစားပဲရိုးရိုးသားသာအပြစ်​ကင်​းတဲ့ အပြုံးဟာ လက်​ခံသူ​ရော ပြုံးသူရဲ့စိတ်​နှလုံးကို​အေးချမ်​း​စေတယ်​။
Iris ၏ ပြုံးပါ အဆိုကို လက်ခံပါတယ်။ မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်း အကြောင်းတရားထဲမှာလည်း ပါတယ်လေ။
အဟဲ မနေ့က မင်္ဂလာဆောင်သွားတာ။ ရှေ့နားဘေးခုံတန်းလေးမှာ လူတစ်ယောက်ထိုင်နေတယ်။ သူ့ပုံက ဆံပင်ဆေးဆိုး အကျီ င်္ဘော်ဒီဖစ်အပြင်ထုပ်လို့၊ ဘောင်းဘီကလဲ စကင်လိမ်မော်ရောင်နဲ့။ ပုလဲပုတီးကြီးဆွဲ လို့။ လူပုံကလဲနွဲ့နွဲ့လေး။ အဲ့တော့ထင်လိုက်တာက သတို့သမီးရဲ့ မိတ်ကပ်အခြောက်မှတ်တာပေါ့။ နောက်မှ သူက သတို့သမီးတပည့်အဆိုတော်လေးတဲ့။ အိပ်မက်ဆုံရာမှာပါဖူးတယ်ဆိုလား။ ဧည့်ခံပွဲရောက်မှ သူများပြောမှသိရတာ။ အစောပိုင်းတလျှောက် ဘုရားရှေ့မှာပွဲလုပ်နေတုန်း သူ့ကို မိတ်ကပ်အခြောက် ပဲထင်တာ။ နောက်ပွဲပြီးသွားလို့ပြန်မယ်လဲလုပ်ကော သူနဲ့လမ်းမှာဆုံကော။ သူကထူးထူးခြားခြား ပြုံးပြတယ်။ ကိုယ်ကလဲနှစ်နှစ်ကာကာပြန်ပြုံးပြလိုက်တယ်။ ကိုယ်ကတော့ အထင်လွဲမိတာအားနာလို့။ သူကတော့ မသိပဲနဲ့ ပြုံးပြတာ။ တော်သေးတယ်။ ကိုခင်ခလို့ စိတ္တဇဆေးရုံက ဆရာဝန်အနားမှာမရှိလို့
(.အမှားတစ်​ခုတစ်​ခု လုပ်​မိတဲ့ အခါ ဖုံးကွယ်​မထားမိပါ​စေနဲ့။ အသိ​ပေးပြီး အမှန်​ပြန်​ ဖြစ်​​အောင်​ လုပ်​ပြလိုက်​ပါ။)
ကိုယ်တိုင်လည်း များသောအားဖြင့် ကိုယ်မှားတာကို လူမသိအောင် မသိလိုက်ဖာသာနေချင်တဲ့စိတ်က အများသား။ :boss:
မဟုတ်လဲ ဂျူနီယာ နေရာက ဆိုတော့ကာ
ဂျူနီယာလို ဖတ်သွားပါတယ် စီနီယာ
ဟုတ်​တယ်​ မမ။ အမှားလုပ်​မိရင်​ များ​သောအားဖြင်​့ကိုယ်​့ကိုအထင်​​သေးမှာစိုးလို့ မ​ပြောပဲကြိတ်​​ဖြေရှင်​းဖူးတယ်​။ စီနီယာ​တွေကိုအသိမ​ပေး​တော့ ပြသနာက တ​ဖြေး​ဖြေးကြီးလာ​ရော။ အချိန်​နဲ့လုပ်​ရတဲ့အလုပ်​​တွေမှာဆိုရင်​ပိုဆိုးကုန်​​ရော။ အဲ့​တော့ပြသနာ​သေ​း​သေးကြီးကြီး အသိ​ပေးပြီးမြန်​မြန်​ရှင်​းလိုက်​တာပို​ကောင်​းတယ်​။ ကိုယ်​ထင်​​နေတဲ့ပြသနာ​သေး​သေး​လေးက တခြားတစ်​ဖက်​မှာကြီးမားတဲ့အခက်​အခဲဖြစ်​ရင်​ဖြစ်​​နေတတ်​တာ။ စီနီယာက​ပြောဘူးတယ်​။ အလုပ်​မှာ ၉၀%မှန်​တာကိုလက်​မခံဘူး။၁၀၀%မှန်​ရမယ်​တဲ့ ။​ကျောင်​းစာလို မဟုတ်​ဘူးတဲ့။ တကယ်​လည်​းမှန်​ပါတယ်​။ ယူဆလို့လည်​းမရဘူး။ ​သေချာရမယ်​။တိကျရမယ်​။
ဟဟ.သိကြားမင်​းဆို​တော့ ဂျူနီယာမဖြစ်​နိုင်​ဘူး။ ဖြသ်​ချင်​းဖြစ်​ စီနီယာပဲ​နေမှာ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂျူနီယာ လို ့သတ်မှတ်ပြီး
စိတ်ထားလေးတွေ လှပဖို့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကြိုးစားနေပါတယ်
..အရမ်​းဝမ်​းနည်​းတဲ့ အခါ ဝမ်းနှုတ်ဆေးသောက်လိုက်ပါ။ စိတ်က ဝမ်းနည်းတာကို မေ့သွားနိုင်လောက် အလုပ်ရှုပ်သွားပါလိမ့်မည်။
(ငါငို​နေမှန်​းသိတုန်​းက မင်​းအနားချက်​ခြင်​း​ရောက်​လာပြီး မန်ကျည်းဖျော်ရည်တိုက်သလိုမျိုးပေါ့)
..ပြသနာ တစ်​ခုကို ကိုယ်​တိုင်​မ​ဖြေရှင်​းနိုင်​တဲ့အခါ မြန်မာနိုင်ငံ က ကူညီဗျစေ ကို အပ်လိုက်ပါ။ ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းတာမှ တော်သေးဟု အမြင်မှန်ရလာပါလိမ့်မည်။
..အမှားတစ်​ခုတစ်​ခု လုပ်​မိတဲ့ အခါ ဖုံးကွယ်​မထားမိပါ​စေနဲ့။ အသိ​ပေးပြီး အမှားတွေ ဆက်လုပ်ရင်တောင် ဝန်ခံထားတဲ့မျက်နှာနဲ့ အပြစ်တင်ခံရမည်မဟုတ်။
..စကားအမှား​ပြောမိမှာ မစိုးရိမ်​ပါနဲ့…ကိုယ့်စကား အမှားကို ယုံပြီး လုပ်မဲ့သူသာ ခံရပါလိမ့်မည်။
..ကိုယ်​့ကိုကိုယ်​ ကျန်​းမာ​အောင်​​နေပါ။ ဒါမှ လုပ်ချင်တာတွေ အကုန်လုပ်နိုင်မည်။
..အန်​ဒရယ်​ ဖြစ်​​စေမဲ့ အပြုအမူ​တွေ၊ မလုံခြုံမှု​တွေကို ဖြစ်​​စေမဲ့ အပြုအမူ​တွေ။ အသုံးအ​ဆောင်​​တွေကို သတိထားပါ။ တကယ်​လို့ ထိခိုက်​မှုတစ်​ခုခုဖြစ်​ပွားခဲ့ရင်​ အင်ရှူးဝါးရန့် များများကလိန်းနိုင်မဲ့ နည်းကို သိထားရန်ဖြစ်သည်၊
..အဆူခံရတဲ့ အခါ ဆူတဲ့သူကို မမုန်​းပါနဲ့။ စိတ်ထဲကနေ ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ် ဘာသာ စကားမျိုးစုံနဲ့ ဆဲဆိုပလိုက်ပါ။ မင်​း​ကျေနပ်​နှစ်​သက်​သွားမှာဖြစ်​သလို သူကလည်​း ဘာမှ သိလိမ့်မည်မဟုတ်။
..တစ်​ဖက်​သား​ပြောတဲ့ စကားကို​လေး​လေးစားစားနား​ထောင်​ပါ။ သူ့စကားမှ သူ့ဇာတိကို သိပါလိမ့်မည်။ နောင်တစ်ချိန် ငွေညှစ်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးရှိ၏။
..အယူအဆ ဆုံးဖြတ်​ချက်​မတူ ​ပေမဲ့ သူကို​လေးစားပါ။ ရန်​သူတစ်​​ယောက်​လိုမဆက်​ဆံပါနဲ့။ တစ်ချိန်မှာ သူ့ အယူအဆနဲ့ သူ့ကို ကြိုးကွင်းပြန်စွပ်နိုင်လိမ့်မည်။
..ကတိကိုလွယ်​လွယ်​မ​ပေးမိပါ​စေနဲ့။ ​ပေးခဲ့မိရင်​ အကြောင်းပြချက် လှလှလေးတွေပါ လွယ်လွယ်ပေးနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားသင့်သည်။
..အထီးကျန်​တယ်​လို့ ခံစား​နေရရင်​ အထီးတွေနား များများနေပါ။
..မိသားစုကို သတိရ​ကြောင်​း အသိ​ပေးပါ ပိုက်ဆံမပို့နိုင်သေးရင်။
..မိုးရွာတဲ့အခါ ငါ့ကိုသတိရပါ။ ငါ နင့်ထီး ပြန်မပေးတော့ဘူးနော်။
ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ် ဂေါက်သလောက် နောက်သွားတယ်။
မဟုတ်တာတွေကျမှ ဆိုးကော ကေဇီရလားဟမ်?
နာ ကောင်းကောင်းကန်းကန်း အကြံတွေပေးထားတုန်းကတော့ ဆိုးမကောဘူးလားးး
ဆိုးကောလ် ကေဇီ ပါ လို့
စနိုးဒန် ဇီကို လေးစားပါဒယ်
Iris ရဲ့ စာလေးတွေဖတ် ..ဟုတ်သားနော်..
လိုက်နာ နိုင်ရင် ကောင်းတာပေါ့လေ အတွေးနဲ့ ဆက်ဖတ်
ဆွိ Comment လဲတွေ့ရော
တစ်ကယ် လုပ်နေတဲ့ အချက်တွေ ခုမှတွေ့တော့ တာကိုး….
:'( ဟွန်​့ ခိုင်​ဇာ့နည်​းက ပို​ကောင်​းတယ်​။ ထီးငှါးပြီး ပြန်​မ​ပေးဘဲ ထားအုံးမှ။
Chan Linn Aung says:
I dare to recommended for this post.
အိုင်းရစ်လေးကို ဖက်မှာပေါ့.. ဖက်ယုန်မက… ရှလွတ်